KU HAYNTA TURKEYGA SIDA XAYAWAANKA - EEYAHA
Ku haynta Turkeyga sida Xayawaanka
Wally markay tahay 6 bilood waa hal weyn oo Turki ah. Tundra iyo Tacoma labada Pyrenees weyn ayaa daawanaya Wally.
Shimbir weyn oo Waqooyiga Ameerika ka tirsan (Meleagris gallopavo) oo si qurux leh u daboolay baalal iyo qaawan la waraabiyey madaxa iyo luqunta. Waxaa jira turkiga duurjoogta ah, laakiin sidoo kale waxaa si ballaaran loogu dhaqaaleeyaa cuntada.
Markay dadka intooda badani ka fekeraan turkey waxay ka fikiraan casho mahadnaq ah. Inkasta oo inta badan ee kicisa turkiga ay u koraan si ay u cunaan, qaarna waxay u hayaan turkiga sidii xayawaan gurijoog ah Qaarkoodna labadaba qaar waxay u haystaan ​​qaar sidii xayawaan guri joog ah halka kuwa kalena ay cunayaan. Waxaa jira kuwo badan oo kala duwan noocyada turkiga , si kastaba ha noqotee waxaa jira laba nooc, mid guri iyo mid duurjoog ah. Digaagga duurjoogta ah ayaa ku nool kuna dhasha duurjoogta qaarna waxaa loo hayaa sidii xayawaan gurijoog ah. Way duuli kartaa waxaana la sheegay inay ka caqli badan tahay tan gudaha. Turkiga turkiga waa nooca lagu cuno mahadnaqa. Qaar ka mid ah turkiga gudaha ayaa duuli kara noocyada qaarkoodna ma duuli karaan. Turkiga gudaha iyo duurjoogta ayaa jir ahaan ka duwan. Turkiga guryaha ka jira ayaa aad uga ballaaran digaagga duurka. Digaagga duurjoogta ah ayaa aad uga dheereeya digaagga gudaha. Turka duurjoogta ugu dhaqsaha badan wuxuu socon karaa ilaa 35 mph, halka xawaaraha digaagga ee buuxa ee digaagga uu yahay socod gaabis ah (dheddigga waxyar ayey ka dheereeyaan maxaa yeelay waxay ka miisaan yar yihiin ragga). Turkiga duurjoogta ahi wuxuu leeyahay indho iyo maqal ka roon turkiga gudaha. Kaliya turkiga lab gobble turkiga dumarka ayaa sameeya a dhawaaqa codka laakiin ma gobbleyn karo. Turka labku badanaa wuxuu taageeraa baalasha dabada, halkaas oo sida haweeneydu dhif tahay.
Turkeyga Duurjoogta ah (buuxa koray)
Miisaanka: Ragga 8-24 rodol (3.6-11 kg), dheddigga 7-16 rodol (3.2-7.2 kg)
Ragga digaagga gudaha waxaa lagu yaqaan inay culeyskoodu yahay 86 rodol (40 kg).
Cunnada turkiga ee gudaha waxay culeyskeedu dhan yahay laba laab tan culeyska digaagga duurjoogta ah. Digaagga duurjoogta ah ee labku waxay koraan illaa afar dhudhun, oo ay ku jiraan dabada. Dumarku waxay ku koraan illaa saddex fuudh. Turkida duurjoogta ah waxay yeelan kartaa baalal baalal ah oo gaaraya 5 fuudh oo ballac ah. Turkiga gudaha ayaa aad uga culus kana baaxad weyn turkiga. Digaagga digaagga ee dheddigga ayaa aad uga yar kan ragga digaagga ah.
Cunnada turkiga ee aan duuli karin waxaa lagu hayn karaa gudaha deyr ood leh, sida ood ay ku hayn karaan ey ama riyo. Cunnada turkiga ee duuli kara waa inay lahaadaan nooc shabaq ah oo ay ku sii hayaan.
Digaagga duurjoogta ah, dhinaca kale, waxay u duuli karaan si aad u wanaagsan. Ilaa aad ka ilaalisid baalashooda waxaad u baahan tahay qafis gebi ahaanba ku lifaaqan. Laba turkey waxaa lagu hayn karaa aag cagtiisa 90 square oo ugu yaraan 6 fuudh dherer ah. Si kastaba ha noqotee qolka badan ee aad siin karto turkigaaga ayaa sii fiicnaanaya. Haddii aad leedahay turkiga duuli kara, qafiskooda ku lifaaqan waa inuu lahaadaa silig digaag ah oo ku wareegsan dhinacyada oo dhan iyo dusha sare oo leh loox alwaax leh silig ey adag oo bir ah oo dhererkiisu yahay 3-4 fuudh dhererkiisa xagga hoose si looga ilaaliyo xayawaanka kale loona ilaaliyo turkiga ku jira. Turkiga duuli kara waa in la siiyaa daaq. Hooy waa in la bixiyaa si looga ilaaliyo shimbiraha roobka, dabaysha, roobdhagaxyada, qabowga iyo barafka, ha ahaato daaqad fudud oo daboolaysa aagga lagu dagaallamayo ama xero weyn oo dhab ah ama dhisme yar. Nooca ugu fiican ee dabaqa waa dabaq wasakh ah. Hay waxaa loo bixin karaa sidii dabool dhulka ah. Sibidh si fiican ayaa loo nadiifin karaa, hase yeeshee way ku adag tahay cagaha turkiga. Dabaqa alwaaxa wuu xumaan karaa maadaama saxaro dabacsan ay ku daadanayaan qoryaha.
Qalinka turkey waa inuu ahaadaa mid nadiif ah. Qashinka waa in la sifeeyaa oo wasakhda cusub ama cawska la dhigaa dhawrkii maalmoodba mar, taas oo ku xidhan hadba inta turkiga aad ku haysato baaxad ahaan. Markasta oo aad xejisato turkiga, wax badan ayaad nadiifin doontaa.
chihuahua iyo cairn terrier mix
Turkidu waxay daryeeli doonaan baahidooda naftooda u gaarka ah. Haddii aad leedahay turkiga duurjoogta ah oo aadan rabin inay duulaan, baalashooda waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo jaro.
Turkey-ga waa in lagu quudiyaa jajab sida cunnadooda ugu weyn. Waxaad ka iibsankartaa haraaga shimbiraha bakhaarro badan oo isugu jira beero iyo xayawaan. Ka sokow jilaaga sidoo kale waa la quudin karaa miraha iyo khudradda. Turkidu waxay cuni doonaan noocyo caleemo ah, haramaha, looska duurjoogta, gocondhada, cawska, canab, kale, dhammaan berryda ay dadku cunaan, berry saytuun Ruush ah, geedo dogwood ah, canab duurjoog ah, miraha khamriga, geedaha sassafras, miraha malabka iyo xitaa sunta berry ivy. Turkidu way jeclaan doonaan hadaad ku dul rusheeysid boorashka cuntadooda. Turkeyga xitaa waxay jecelyihiin inay cunaan digaag ukunta taas oo dhulka ka dillaacday. Digaagga duurjoogta ah sidoo kale waxay cunaan cayayaanka iyo xayawaanka yaryar. Si looga hortago cudurka madowga iyo dulinleyda kale, bucshirooyinka cusub ee dillaacay (turkiga ilmaha) waa in lagu quudiyaa dawo u dhiganta Turkiga oo ah 28% 8da toddobaad ee ugu horreysa. Laga bilaabo 9 ilaa 14 toddobaad waa in la quudiyaa 20-21% Soo-saaraha Turkiga. Bilowga dawada digaaga sidoo kale waa la quudin karaa, hase yeeshe Bilowga / Kobaca Turkiga ayaa ka fiican. Waxaad ka heli kartaa quudin daawo ah dukaamada beeraha. Xayawaanka digaagga duurjoogta ah ee ka yar laba bilood jir ayaa doorbidaya inay cunaan cayayaanka qaarna ma qaadan doonaan quudinta digaagga ee aad ka iibsato dukaanka beeraha. Waxaa laga yaabaa inaad ku quudiso waxyaabo sida urta, dixiriga cuntada, gooryaanka, caaro iyo kuwa lamid ah, kuwaas oo gacanta lagu qaban karo ama lagu gadan karo dukaamada xayawaanka lagu iibiyo ama kuwa wax lagu gado. Ka taxaddar markaad cayayaanka gacanta ku qabanayso inaysan u nuglayn sunta cayayaanka. Sababtaas awgeed waxaa ugu wanaagsan in lala aado cayayaanka laga soo iibsaday dukaanka xayawaanka. Cunnada turkiga ayaa sida caadiga ah si fiican u geyn doona jellada, turkiga aad u da 'yarna waa in la siiyaa jajabka la jajabiyey illaa ay ka weynaadaan inay la qabsadaan lafaha buuxa. Waxay ku iibiyaan jajab jajaban dukaamada beeraha. Haddii aad qorsheyneyso inaad digaaggaaga dhigato ukunta waxay u baahan yihiin kaalshiyam dheeraad ah. Quudinta qolofta oyster la jajabiyey waa isha weyn ee kaalshiyamka. Turkiga waxay ubaahan yihiin dhagaxaan yar ama miridh si ay qatar ugu ahaadaan inay shiidaan cuntada, tusaale ahaan wasakhda, carada, qolofta ukunta ama qolofta lohod. Gorgorku waa qayb ka mid ah caloosha shimbirta oo ay ku jiraan dhagxaan yaryar. Waxay ka caawineysaa inay shiidi karaan cuntada si ay u shiidi karaan. Biyaha macaan waa in had iyo jeer lagu bixiyaa nooc ka mid ah baaquli ama biyo-digaag qaybiyaha oo laga iibsan karo dukaanka beeraha.
Turkey waa in la siiyaa meel ku filan oo ay ku daryeeli karaan baahidooda jimicsiga.
Cimriga ugu badan ee la duubay turkeyga la haysto waa laba iyo toban sano iyo afar bilood. Turkiga ku nool duurka, ugu badnaan waa in ka yar toban sano, laakiin celceliska nolosha ee digaagga labku waa in ka badan 2 sano oo kaliya in ka badan 3 sano dheddigga. Qaar ka mid ah digaagga ragga ah ee guryaha ku nool ayaa inta badan weynaada oo aad u culus oo aan culeyskooda qaadi karin sannadka ugu horreeya. Cunnada turkiga ee loo soo saaray cunno ahaan looma abuurin inay ku noolaadaan hal sano.
U nugul cudurka madow. Blackhead 'cudurka' runti waa dulin. Waxaa xambaarsan digaag aan u nugulayn. Waxay ku keentaa turkigu inuu yeesho midab huruud ah oo beerka ka sii weynaada oo u dhinta turkiga. Digaagga oo dhan maaha kuwa sidayaal dulinkan, si kastaba ha noqotee, qaar baa ah. Noocyada qaar ka mid ah digaagga guryaha ayaa aad u cuslaada si ay u duulaan, labkuna sida caadiga ah wey weynaadaan lugahoodana ma taageeri karaan culeyskooda.
Cunnada turkiga waxaa loo yaqaan tom ama mararka qaar waxaa loo yaqaan gobbler, digaaga digaagana waxaa loo yaqaan digaag. Noocyada qaarkood ee digaagga duurjoogta ah labka iyo dheddigga ayaa lagu kala garan karaa baalasha naaska. Baalaha naasaha ragga ayaa leh talooyin madow, kuwa dhediguna waa bunni. Noocyada qaar ka mid ah turkiga guryaha waa in si dabiici ah loo soocaa, noocyo kale ayaa iskood u tarmi kara. Wixii turkey duurjoogta ah xilliga taranka waa Maarso iyo Abriil. Si loo soo jiito dheddigga, digaagga iyo digaagga gudaha labadaba, labku waa goblan doonaa oo wuu dhaqaaqi doonaa, isagoo baalalkiisa dabada ka bixin doona. Qoob-ka-ciyaarkan ayaa soo jiita dheddigga si ay uhesho. Ragga waxay ku dhashaan in kabadan hal dumar ah. Xitaa turkiga gudaha ee aan is qaban karin faragelin la'aan bini-aadam, labku wali wuu ku sii jeedsan doonaa isagoo isku dayaya inuu soo jiito dheddig. Muddada soo-saaridda ukunta digaagga waa qiyaastii 28 maalmood. Xilliga buulku waa bartamaha Abriil illaa bartamaha Juun waqtiga ugu sarraysa ee ugu sarraysa waa qiyaastii bartamaha Maajo. Digaagga duurjoogta ah waxay jiifsan doonaan 8-16 ukun waqti 12 waa isku celcelis. Cunnada turkiga waxaa loo yaqaannaa poults. Xayawaanka duurjoogta duurjoogta ah ma duuli karaan illaa ay ka gaarayaan illaa 2 toddobaad.
Magaca 'turkey' wuxuu ka soo jeedaa erayga 'tuka,' oo macnaheedu yahay daawaha Hindiya. Digaagga duurjoogta ayaa jiray muddo dheer ka hor intaan reer Yurub gumeynin Ameerika. Digaaga duurjoogta ah waa inaan lagu khaldin ilmaadeeradooda, turkiga guryaha (kuwa aad u cunayso Thanksgiving). Digaagga duurjoogta waxaa laga heli karaa duurjoogta Waqooyiga Ameerika. Iyagu waa shimbiraha ugaadha ugu waaweyn ee laga helo qaybtan adduunka. Xayawaanka turkiga waxaa sidoo kale laga heli karaa Waqooyiga Ameerika oo dhan, hase yeeshe lagama helo duurjoogta ee waxaa ku barbaaray bani'aadamka cunno ahaan. Turkiga waa mid ka mid ah shimbiraha ugu caansan Waqooyiga Ameerika. Waxaa la sheegay in Benjamin Franklin uu doonayay inuu turkiga ka dhigo astaan ​​qaran halkii uu ka sameyn lahaa gorgorka bidaarta leh.
Turkiga Gudaha-Wendy, digaag dheddig ah (bidix) iyo Wally, digaag lab ah (midig) oo jira 10 bilood.
Qaybo ka mid ah cirbadaha duurjoogta ah ee ka socda waddada ku teedsan koonfurta New Jersey, USA
Qeyb ka mid ah turkiga duurjoogta ah ayaa lagu arkay bartamaha Pennsylvania, USA
xadka collie cross eey lo'da
Turkiga Gudaha - Tom yar (gadaal) oo leh digaag yar (hore)
Turkiga Sawirada 1
Turkiga Sawirada 2
Turkiga Sawirada 3
Snoodkii Turkiga iyo Wattle
Shimbiraha Duurka ku jira
Kalsoonida eyda leh Xayawaanka aan Xayawaanka ahayn
Kalsoonida Eyda ee Carruurta
Eeyaha La Dagaalanka Eyda kale
Kalsoonida Eeyda leh Shisheeyaha
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Cairn Terrier
Macluumaadka Taranka ee Shiinaha Shar-Pei Dog iyo Sawirro
Macluumaadka Taranka Eeyga Bichpoo iyo Sawirro
Shih-Poo Dog Sawirada Sawirada Eeyaha Isku-dhafan, 1
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee Olde Boston Bulldogge
Macluumaadka Taranka Eeyaha Mastidoodle iyo Sawiro
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Shetland Sheepdog
Macluumaadka Taranka Eeyaha Affenpinscher iyo Sawiro
lo'da eyga jarmalka adhijir isku dhafka ah
bulldog Maraykan dabeecad isku darka pitbull
jiir Terrier jack russell oo isku dhafan eeyo
shih tzu schnauzer isku darka nolosha
sawirrada ter Territorrada yarr yorkshire